Ku-2020, amaphrojekthi wokulungisa kabusha ama-20 azofakwa eStavropol Territory - umagazini i- "Potato System"
Ngokusho koMnyango Wezinqubomgomo Zolwazi weStavropol Territory, inani eliphelele lamaphrojekthi asetshenzisiwe kulo nyaka cishe angama-ruble ayizigidi eziyizinkulungwane ezimbili.
“Bangaphezu kuka-1 billion abelwe ukuxhasa izwe ngokubuyiselwa komhlaba kwisabelomali esihlanganisiwe sesifunda. Njengamanje, kunamaphrojekthi amasha angama-20 asetshenziswa abiza ama-ruble ayi-1,8 billion, okubonga ukuthi umkhawulo wokubuyiselwa komhlaba eStavropol Territory uzokhula ngamanye amahektha angama-9 wokunisela kwanamuhla ngasekupheleni konyaka, ”kusho uNgqongqoshe Wezolimo esifundeni uVladimir Sitnikov.
Futhi, izicelo ezingama-20 sezivele zithunyelwe unyaka ozayo. Amaphrojekthi aklanyelwe ukudala izinhlelo zokunisela endaweni engamahektha ayizinkulungwane eziyi-12,3. Izindleko zomsebenzi zizoba ama-ruble angu-2,7 billion. Ngokuzayo, kunamaphrojekthi angaba khona angama-23 athuthukiswa ngenani lama-ruble ayizigidi eziyizinkulungwane ezi-5.
Source: Iqiniso leStavropol
Tags: ukuniselaI-Stavropol Territory
Kuzokwakhiwa isitshalo sokucubungula ngokujulile okusanhlamvu eKrasnoyarsk Territory
Amathani ayizinkulungwane eziyi-15 amazambane avunwe e-Udmurtia